Isikhathi sokuvuselela i-iPad yakho? Yikuphi ongakhetha kukho? | Ngivela kwa-mac
Kufakiwe | | iPad
Asazi noma ngabe zizoba khona yini izindaba ezihlobene nalo mkhiqizo ngasekupheleni kuka-2016 noma cha, kepha uma i-Apple ikhipha isizukulwane esisha, lokhu bekungeke kukufanele, ngoba bekungeke kube nokungezwani okuningi maqondana nesedlule. Emandleni onke amamodeli wamanje asele futhi asesitoreji futhi. Kwizesekeli nemisebenzi awukwazi ukucela okwengeziwe. Kungaba yindaba yokulinda izinhlobo ezizayo ze-iOS ukubona okuthile okusha ku-iPad, okwamanje kulindeleke okuncane.
Ingabe yisikhathi esihle sokuvuselela i-iPad yakho yakudala? Yiziphi izizukulwane esezigugile futhi yiziphi ezingakenzi?
1 Okwamanje yi-iPad Air 2 ne-Pro
2 Izinketho zokuvuselela
3 Iyini impilo ye-iPad?
4 Intengo, ikhwalithi kanye nemakethe
Okwamanje yi-iPad Air 2 ne-Pro
IOS 10 ilethe ukuthuthuka okuningi okuncane nokukhulu. Kubo bonke osayizi. Kusuka kuzinguquko zesixhumi esibonakalayo ziye emisebenzini emisha. Bakwazile ukuthuthukisa usayizi nokuhlangana kwezinhlelo zokusebenza zomdabu ku-12,9-inch iPad Pro futhi bathathe uSiri baya kwelinye izinga eliphakeme kakhulu, ngokuqalisa izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni. Opopayi abasheshayo nohlelo lokusebenza oluzinzile kunakuqala. Inkinga ongayithola ukuthi i-iPad yakho ayibuyekezi ngokuba ngaphambi kwesizukulwane sesine. Yize ibingabuyekezwa, ibivele iqala ukusalela emuva futhi ibibambeka futhi isebenza kancane.
Uma ucabanga ukuvuselela entsha, kuzofanele ucabange ukuthi kufanele yenziwe noma cha. Ngaphezudlwana kwe- € 400 uzothola i-iPad Mini 4 noma i-iPad Air 2 ene-32Gb, inketho enhle kakhulu yokuzilibazisa, ukugembula, ukuphequlula iwebhu, usebenzisa izinhlelo zokusebenza, ukuxhumana kanye nokusebenza. Yimodeli engibhala kuyo lokhu. Uma kunalokho ufuna imodeli yamanje ethe xaxa futhi enamandla, nge-Smart Connector ne-Apple Pencil, Ungakhetha i-Pro, ama-intshi ayi-9,7 ukusetshenziswa okujwayelekile nokwansuku zonke noma ama-intshi ayi-12,9 uma udinga isikrini esiningi noma uzosebenzisa ipensela nsuku zonke futhi udinga isikhala esithe xaxa. I-9,7-intshi isuka ku- € 679 kwathi i-12,9 isuka ku- € 899. Izesekeli ngokwehlukana.
Uma ufuna okuthile okunamandla nokwamanje kepha okushibhile unayo i-iPad Air 2, uma ufuna okuthile okubiza kakhulu futhi okuyiProfessional, futhi uma ucabanga ukuthi ungabamba omunye unyaka ukuze uye komunye olandelayo, ngincoma ukuthi yenza kanjalo. Asazi ukuthi i-iPad yowezi-2017 izoletha ini kodwa kunamahemuhemu okuthi zizoba sha kakhulu nokuthi zizophatha izici nezinto ezizoshintsha futhi zithuthukise umkhiqizo.
Iyini impilo ye-iPad?
Bekuhlale kushiwo ukuthi kungumakhalekhukhwini ongahlala isikhathi eside. Into ejwayelekile nalokho okuthembiswa i-Apple ukuthi iminyaka emibili izosebenza kahle, kepha ngokwesibonelo endlini yami sine-iPad 3 yeminyaka emine esasetshenziswa, yize ingasebenzi nekhibhodi yangaphandle noma yini efana naleyo , kepha ukufunda, ukuxhumana, ukuphequlula iwebhu njll. Manje iyeka ukubuyekeza kepha ngenxa yalesi sizathu ngeke sikuthengise noma sikuthathe umhlalaphansi. Izosala ekhaya futhi sizoqhubeka nokuyisebenzisa inqobo nje uma isivumela.
Intengo, ikhwalithi kanye nemakethe
Ngakho-ke lawa amamodeli abiza cishe ama- € 500 nge-16Gb kuphela. Manje usungazithola zisuka koku-400 ezengeziwe futhi ezinesitoreji esiningi. Imakethe yethebhulethi ayikho ezingeni eliphezulu futhi amanani entengo awekho phezulu uma sibheka ukuthi yini esingayenza ngayo nokuthi emisebenzini eminingi nasemisebenzini ithatha indawo yekhompyutha. Ukusebenza okuhle, ibhethri elihle, amandla nejubane okudlula lokho kwamakhompiyutha amaningi nokunethezeka kokusetshenziswa nokuphatheka abanye abangakuthanda. Akuwona amaphilisi e-Surface noma e-Windows, lokho i-Apple esikunikeza kona ngakolunye uhlangothi ikhompyutha enesistimu yokusebenza yedeskithophu enhle kakhulu futhi ngakolunye uhlangothi i-iPad ene-iOS ezokunika konke kube yidivayisi yethu eyinhloko
Futhi ukuphawula kancane ngentengo ye-iPad, khumbula ukuthi uma uchitha isilinganiso esingu- € 800 kuyo nakwikesi noma kokutholakala kukho, Kungakubiza cishe ama- € 200 lapho ungahlala khona iminyaka engu-4, futhi isazosebenza ngemuva kwalokho, noma ngabe isesikhathini noma cha. Futhi uma kungeyona i-iPad, akuyona i-iPad.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » iPad » Isikhathi sokuvuselela i-iPad yakho? Yikuphi ongakhetha kukho?